SAWIRRO: Xaalada Laascanod iyo Sidii maanta ay wax uga dhaceen (Warbixin) | KALSHAALE
SAWIRRO: Xaalada Laascanod iyo Sidii maanta ay wax uga dhaceen (Warbixin)
Jun 14, 2018 - 46 Aragtiyood
Laascaanod (Kalshaale) Waxaya ahayd abaaro 9:30 Am ayaa bartamaha suuqa magaalada Laascaanood ka bilowday rabshado kuwaa oo sababay in Laba dumar ah uudhaawac soo gaadhey kadib markii ciidamada maamulka Somaliland rasaas ooda kaga qaadeen suuqa weyn ee magaalada Laascaanood.
Labadan hablood ayaa magacyadoodu kala yihiin: Sacdiya Xirsi Cabdilaahi iyo Shugri Cabdilaahi Ducaale waxaana hadda lagu dabiibayaa Cusbitaalka Manhal .
Shacabka ayaa markii danbe qaarkood lasoo baxeen qoryo ku waasoo rasaas ridey iyaguna waana ta sababtay in ciidamadii Somaliland yaacan iyagoo ka cararay hal qori oo nooca AK47 ah iyo agab kale oo ay kamid yihiin kabo kuwa askarta ah oo qaar kamid ah askartu haleeli waayeen inay qaataan.
Laba qof ee dhaawaca ah ayaa la geeyey Cusbitaalka adeega wacan ee Lasanod Manhal Hospital a waxaana la ii sheegay in wax looga qaban kari waayey magaalada loona baahday in la qaado hase ahaatee muran xoogan ayaa ka taagan meesha loo qaadayo.
Dadka shacabka ah ayaa isku gadaamey xarunta caafimaad ee lagu dabiibayo labada qof kuwaasoo sheegay in dhaawaca loo qaadayo magaalada Garoowe, halka maamulka Somaliland uu ku adkaysanayo in loo qaado Hargeysa.
Dhinaca kale , Waxaa jira iyana kacdoon xoogan oo dhinaca shacabka kuwaa oo markii danbe isu bedelay in laamiyada la gubo .
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (46)
Tolaay yaaa daaroodaay kkkk meeyeee daaroodkii aad u yeedhanayseen 7da bilood ee idiinka kalayimid Ethiopia ilaa kismaayo ilaa gedo?! Dee waakaasee hadaba laascaanod haydiin xoreeyaan waanagaa hoos hoos ugu dhignay rasaas nool nool shacabkiiniiyee.
FG: CIIDKIINA WAA CAAWAA INSHA ALLAH.
Xaar baa idin ka socdee waa see xaalku?
Yaa Gedo iyo itoobiya ka yimid?
Wallee arintu waa idin ku xuntahay been Allaa caayey.
Miyaadan dhagaysan Ku Xogeenkaaga Ina Camay Oo Leh Xataa Mareexaan Baa Ku Dhintay Meeshaas Tukaraq Ka Yimid GEDO, oo markii mid dadka uu uwaramayaya ku yidhi HADALKA INOO KALA REEB WAA SIROO WAA LAYNA DHAGAYSANAYAAYE , Camay na ku jawabaay oo heedhee ma wax siraa jirra.
Anyway caawaa waa ciidkii miyaydaan beri subaxa ku tukan doonin LAASCAANOD?!
Allo kala qabooji umadan qoorta isasuran
Puntlaneey Jooji Durbaankaan aad Tumaysid Markaad Danlee Dahay Shacab Ayaa Ku Baaba’aya Gaas Quraan Jecel Iyo Qarjab Intaaba Iman Mayaan Mediyaha Ayay Kala Soconayaan waa Sadexda Ugu Durbaan Badan
War DABSHID yaa hayaa maanta haynaga qosliyee kkkkk dabshidoow CIIDKII waa caawaa, saad horey usheegtayna waxa soo dhoow WORLD CUP ku hayno dhaafo!!
jeegaanland waa soo afjarantay awal waxay dhihi jireen waanala fara xumeeyay oo moorganbaa na waxeeeyay laakiin beenweeye iminkaa qaawanaanta laysku arkin idin dumarka iyo caruurta xabada lasii dhaca saacado yar ka bacdi dumarkaas ayaa sidii eeydii qoorta idinka xiridoona waadna arkidoontaan waxa idinku dhaca.
Sxb waa ramadaan been ma fiicna. Waxaa jira jifo mareexaan ah oo la dhaho wagar dhac oo reer pubtland ah waxay degaan demada saaxo ee gobalka mudug iyo gaalkacyo. Haddii marke kuwaas dhowr nin ciidabka uga jiraan ma waxaad oran waa mareexaan. Ma waxaa halkaan soo gaara reer diini oo caanudwaaq iyo balanbale degan iyo mareexaan oo dhan oo gedo degan.
Tan kale adinka saw gadabuursay iyo ciise ma wadataan oo ciidanka kuma jiraan waa saasoo kale wax ah.
Ma wax ogaden ah baa dagaalka ku aragteen maxaa daarood ugu haysaan mar walba?
SAADIQ ABSHIR GARAAD hadalkii uu ku hadlay oo ku iftooday in ay xalaal yiheen XOOLAHA DAHABSHIIL, kol haddi uu ka qayb qaadanayo dagaalka PUNTAND IYO SOOMALILAND.
GARAAD SAADIQ, wuxuu siiyey DIGNIIN shirkada DHIIGSHIIL oo ku yidhi, hadaad faraha kala dhexd weyday dagaalka aloosan, adiguna badh aad ka noqonaysaa.
XOOLAHA DAADSAN SOOMAALIIYA oo dhan xalaal beey u noqonayaa in ay boobaan dhamaan dadka aad dhibayso, ha joogeen; MUQDISHU, KISMAAYO, BAYDHABO, GAROWE, DDS IYO GAARISA IYO ISLII.
WALAAHI WAA DIGNIIN CULUS.
AL-XAMDULILAAH dagaalkii dhaqaalaha baa bilowday. PUNTLAND IYO SOOMAALILAND ha la arko middii dutisa.
Waliba waxaa ku xigaa shirkadah SOM-TEL.
MOORIYAANTEE SOOMAALIYEED haddi loo iftooday, meel kasta weey ku dhici doonaan XOOLAHA DHIIGSHIIL.
Awalba lacagta wuxuu ka sameeyey DHIIGII SOOMAALIDA.
Oo heedhee ama wagar dhac ha ahaado ama wabbar dhace soow wuxuba isla yaa yaadaarooday dii aad wadeen mudada dheer mahaa eed bari iyo galbeed iyo koonfurba iskaga yeedheen? Maxaad iikala wada sxb hadeer kkkk waar waa kuwaas dumarkiiniiyee idinkaa been iyo huuhaa aan jirin ku kiciyayee dee usoo gurmada sxb hadeer waxaan arkaayay QARJAB iyo QURAAN jecel oo ka hadlayaa meadiyaha sidii lagu yaqiinay.
Iyagoo leh laascaanod baa dumar iyo caruur lagu laayay kkkkk oo heedhee soow idinku maydin walin idinka on waxna xorayn karayn oo maydin dhihin waan soosocnaa dee hadaba ka xaab xabiyaa wakaas anana jeelka ka buuxinayee.
Mida kale waaa runtaa oo ciidamada qaranka way ku jiraan gadabuursi iyo ciiseba maxaa yeelay dee waa DAD reer Somaliland ah oo dhulkooda difaacaa kkkkk kumay iman YAA ISAAQAAY ee waxay ku yimaadeen yaa reer Somaliland aheey.
Haday Dhiigshiil ku waalata & Sometel kkk
Sxb caawaa waaa ciidkiiye miyaydaan ku ciidayn laaskii inagadaa dhiig shiil iyo waxan aad akhriyaysido??
Asc waxa wax lala yaabo ah in isaaqna dhulbahante isugu wada tago iyo ciise iyo samaroon haday tolkood uyeedhaana looga qayliyo sida somalilander ama xaarka hargeysa ama laaleys ama sacad Cali shire mise waxa isku miisaan ah dhulbahante iyo inta isugu tagtaye anaa wax iga2qaldanyihiin kkkkkkkkkk
Adeeroow nina kuuma soo socdee, iska afur oo saxuuro.
QAYLADII baa kaa dhamaatay.
Take it easy be calm. Anaa abtiyaasheey la hadlayaa ee ku dhahayaa dagaalka joojiya, ee iska mirqaan. Ha wal walin.
Najiska DHIIGSHIIL waa in xoolihiisa lagu soo koobaa;
== QAYB KA MID AH, BURCO
JEEGAANLAND. ILEEY GARXIJIS ka bax SOOMALALAND.
GENERAL CAAREE BAA YAABAN.
Somalilander waad ogtahay daaroodku inuu dhan kasta kaa xigo haduu rabana saacad kugu qaqaban karo lkn aanu ahayn dad qaylo isla gaadha oo sida isaaqa labo ama sadex magaalo oo isu muuqda degan waxad kaloo kufaantaa xiniinyaha kuwa doqonta ah ee dhulbahante oo gobolka sool kugu haya caruurtooda iyo naagohoodana maalin walba daawanaya sidaad ula dhaqmaysid adigoy kaa buuxdo cuqdadii aad xabalaha lafaganjirtey iyo aar goosi
Dhamaan ciid wanaagsan.
Waan ka xumahay dhibaatada shacabka ku dheceyso.
Shacabku wey deganayeen. Nabadbeey ku nolayeen. Golbakoodu wuxuu tiigsanaayay gobalada ku xeeran.
Waxaa isirnimo been ah oon wax loogu teri karin. Ku laab kiciyay kuwa aan ka nexeyn. Waxna aan u teri karin.
Waxaan leeyahay shacaboow dantiina fiirsada lama sheegin taariikhda isirnimo lagu tanaaday. Lagu faa. Iiday. Lagu dhaafay asagaa.
Waxaan kaloon leenahay dowladda ama maamulka maanta ka arimiyo laascanood waa in aad dhowrtaan u naxariistaan wanaajisaan shacabka.
Isirnimaan itaal lahayn waxaa ka roon iska ilooooow.
Waa ogaa in meeshaasi ceebi ka soo socoto kkkkkkk
Ciidii saacado ayaa ka hadhay.
Soomalidu waxay kumaah maahdaa ragga caloohi laciyaar iyo ciil kama baxaw daran nimanka maalin walba naagohooda lagu hor laynayo oo sharaftoodii ku iibsadey qado iyo qaad waxay qaban xanuun layiraahdo ciil sokeeye
Kkkkkkk ciil iyo cadho weeynaa, maantana waxaad ku habaartamaysaa ilaahow dahabshiil dhulka la gooo & ilaahow garjaxajis ka saar Somaliland, marka tabartaadu kuu run sheegto waa sidaan oo kale.
Boowe ma durba kkkk iyadoon ciidkii laba gaadhin baad diracii soo bedeshay!
CIID MUBARAK DHAMAAN MUSLIMIINTA.
Shacabka Soomaaliyeed dhibka halaga daayo maanta waxaan u baahanahey Nabad, is dhexgal iyo Dariseyn.
Hadafkeenu waa Nabad iyo horumar, kadib waxaa xaqiiq ah iney imaandoonto Midnimada iyo Soomaalinimada.
-Ciida yaan laga qasin Caa’ilooyinka.
MUQDOW. WA LAGU ARKAA
Waxaa jira shaqsiyaad golahan wax ku soo qora oo
Markaad u fiirsato uu dilooday nacayb ay u qabaan
Beel soomaaliyeed qoraladii hatan way ka gudbeen
oo waxay soo galan LIVE Facebook waryaada intan
Dadka aad habeen iyo maaalin werarka aad ku
Haysaan way idinka horeeyan wayna la socdaan
Dhaq dhaqaaqa qabiilaysan ee idin dilooday
Areey daarood dowlad waaye dulqaadna wa sitaa
Ciid Mubarak sxb ..Kulicaam wa antum bikheeyre kadaa hakusoo dhoweeyn ciidkee yaanu wadnuhu hoos u dhicin cid aan ogahay oo lahayd ciidkaan ku tukanaynaa meel aan oghaye dabshidoow.
World cup Kik naa hadaan dawanayaa oo ii bilaambayee isaguna hana dhaafo!!
Hub iyo Taakuleyn hadaan ku siiney wali ma waxaad nagu heysataa soo dira WIILASHII INDHA GADUUDNAA.
Adigaa Gurbaan Qabiil garaacey oo Hal magaalo labo maamul u sameeyey,
Adigaa hadda Gurbaan qabiil garaacdey oo Laaska qasaayo.
-Xamar maahan Soomaaliya, Soomaaliya Xamar maahan.
* Garowe iyo Hargeysa hadba kii soo haraa i hoos tagaa.
KAN BARAAWAANI WATA WARYAA ADIGA MAXAA KAA GALAY SOOMALI IS DILEYSA WAR ANAGAA YAAB ARAGNAY OROMADII XITAA WAA NAGA DHEX KALUUMEYSTAA
Dagaalka socda muuse somalidid ayaa qabiil ka dhigay markuu yiri awoowadiin waydiiya waxaan ku
Dhigay war ma dawatay mase taqan shaqsiyadka
Halkan wax ku qora oo facebook live ugu jira sidey
U caytamayan shaqsiyaadkas maxkamad baa sugaysa
Waan garanaayey nacaybka qaar in naar lagu mudan doono
Sxb ciidkii waaa goorma miyaydaan laaskii ku tukanayn??
Qarankii xadka masoo xiray waan garanayey xadka
Iyo jamhuriyada in lagu riyooday
Nin ceytamey waa nin laga badiyey ee iska daa ha wateen ceydooda.
Arintaan marhore ayaan qiyaasay oo aan waliba ku soo qorey Kalshaale.
Sxb Jabhad – Iinta ama habaca waxaa keenay arimahaan soo socdo.
1. Waqti ay meel xun mareyso xiriirka maamul beeledka Puntland iyo Maamulka Villa Xamar
2. Puntland oo aan ka fiirsan dariiqa ama xeeladaha loo adeegsan dagaalka Sool, ( meeshey qaadan lahaayeen ama isticmaal lahaayeen MIDNIMO IYO CALAN BLUE waxey isticmaaleen qabiil iyo calan qabiil) shalaa u dambeysay oo Garjab lahaa ISIR ISIR ayaa loo kala quurey, Dowladda Xamarna kama taliso Garowe.
3. Waqtiga dagaalka oo ku soo aadey waqti doorasho ku soo dhowdahey Puntland, midaas oo weakness point ku ah Governor Gaas.
4. Iyo midda la wada ogyahey oo ah ineysan isu dhigmin Puntland iyo Somaliland, dhan ciidan iyo abaabul, dhan dhaqaale iyo saanad, iyo dhan shacab iyo Population.
– Madaxweynaha Villa Xamar Mr Farmaajo wuxuu dhahey waxaan awoodney waan ka geysaney dagaalada HUWANTA ayagaa laga rabaa iney KALA DOORTAAN TALADA VILLA XAMAR iyo AMARKA Villa ADDISS ABABA.
World Cup Ku Hana dhaafo waanu soo xidhaynaa xadkee.
asc saaxiibayaal ciid mubaarik
kkkk waar bal warka ii siiya baryahan waan maqnayoo waxay ahayd bil cibadee
soona socda hadaad doontaana soon gur guurta
Somalilander ma waxaad ku farxeysaa dumar iyo hablo soomaaliyeed oo la dhaawacay?
Naceybka halkaas miyuu kaa marayaa?
Wallee waxaad iila egtihiin iidooroow sida yuhuudda in la idiin naco.
Adiga tan ku sugeysa ayaan ka naxsabahay iidooroow adiga halkaa ii joog.
Waxaa soo haray horgalada damiirka ka dhibtay ee la socda iidoorka idinka kii nolol lagu qabto nolosha ayaa la idinku gubayaa aakhirana naar ayaa idin sugeysa ileyn waxaad tihiin DAYUUS dayuuskana waa ehelu naar.
Guul puntland guul khaatumo
Soow dumarka banaan umaydaan soo saarin idinku halkii raga aanu ka sugaynay oo maydaan dhihin dhagaxa ku tuuraa oo taayiradana guba wadooyinkana kala xidha beesha calamku ha aragtee kkkk haye dee ma hadaad calaacalaysaaa markii jeelka lagu guray.
Kaalay adigu qoriga qaado dumarka kasoo daa jeelka ilaah baa nin kaa dhigee.
Jabhad ciid wanaagsan igaar
Xasuuqii melez amxaaro ee xamar sidaad uga falcelisay.iyo Is qabqabsiga laascanood ka jiro ee Somalida dhexdeeda ah. Sidaad uga falcelineysid Isma lahan eboow ee waa sidee. Waxaasu makaa wadaniyadba?
Wuxuu ka fikiray shacabka laascanood in aysan dhagax tuurin. Sidii falastiin.
Tanoo kaleey dhashaa talo nimaan laheyn u taag.
Ciid mubarak eboow xasuus somaliyed weligey ma
Tagerin federalka aad meles baa kenay tirahden ayan
Idinku iri war federal waxaa fekerkisa lahaa marxum
Abdulahi yusuf waa dhaxalkii uu somali uga tegey
Federal war dee dagaalka hada socda gala oo iska
Xadiriya ileen waxba idiin ma dhinee taageer muuse
Hadaad federaalka itoobiya laga keenay tageertay isaga iyo wixii keenay.
Maba ahan in aad calaacashaa maxaa yeelay dagaalka laascanood ka socdo tukaraq ka socdo. Gaalkacyo ka socdo waa isku mid waxaa laga dhaxlay federaalka itoobiya. Ee qeybi oo xukun ah.
Eboow hadaad dooneysid somaliweyn. Waa in aad aamintaa wixii ay ku heshiyeen koofur iyo woqooyi 1960kii. Wixii taas ka sokoyeeyo waa sida Hadda socoto. Ee ka xaab xaabi. 2018 yaa tolaayey isir wacasho dhagax tuur sidii falastiin.
Somaliland iyo pudland 2 waa somalidiid laakiin Somaliland warkeedu waa cad yahay meel loo raaco ayey leedahay sax iyo qalad. Laakiin pudland timeheedu dhinac uma xiirmaan.
Xamar laygama xukumo.
Hadeey xamar fiicnaato canshuurta waxbaan ku leenahay. Hadeey xumaatana waxba nagama gelin.
Canshuur dhiibi maayo waxna idinku darsan maayo.wixii lasoo helo waxbaan ku leeyahay.
Waxaan ka dhoofayaa caasimada dalka pudland. Kkkkkkkkkk
Jabhad anigu waxaan tageraa khaatumo state.
Dabshid iyo Garqaad tacsi bay u fadhiyaan, waxay islahaayeen Harti kala dhimay…… Kkkkkkkkk
In maanta Puntland ku midoobayaan way liqi kari la’yihiin.
U fiirso hadalkooda waa batay ayaga iyo kuwa Isaaq sida Aarka, SOmalilander etc..kkkkkk.
Waan sheegay 10 sano ka hor in horgale la iibsaday Dhulbahante dulayn karin oo maalin maalmaha ka mid ah runta tegin.
“Marada guntiga sida dhiisha isaga dhig”
Murtidaan waa ka helay markaan macnaheeda fahmay, waa afsomali qurux badan.
Qofkaan aqoon hoos ugu macnayn
Hadal muxuu tarin, ma raggii kornayl Corfield u dilay dalka iiga bax, miyaa kaa yeelin, asaga ayaa dhulka dhaxal ii siiyey.
Villa Hargeysa ha iska xaadiriso villa Xamar sida villa Garoowe, Villa Kismaayo iyo Villa Baydhabo etc. muran uga qabin in Villa Xamar u taliso..
Maryooley mid, federal, peaceful.
Ama dagaalka noo wada!
Ciid Mubarak kulli.🕌🇸🇴🖐🇸🇴
Villa Xamar=Villa Somalia
Ha i dambaajin, wiilal indho guduudan kusoo dirin kuye..kkkkkkkk😁
Ma kuwa Ugandese xiinyaha jiidayo oo Cadaado buulkii parleman cidba u talin oo bug ah dab qabadsiiyey!!
War naga aamus!
Puntland iyo Somaliland boos kaagama banaana!
Fulaynimo aad cid ka qabto iyo hiil aadan awoodin ayaad ku daashay.
Muraadkaa ku toos awgayoow!
Daawo, the outcome of this war, wixii tabar haysid Galnus ugu hiili, kuwaas ayaa cidla jiifa oo la rabaa in wax la qaybsadaan oo la sinmaan, Puntland, Somaliland, Jubbaland, Sout West region etc.
Nin tiisii dayacay oo ummad kale ku dhex rafanaya.
Yaan ugu dhaartaa! In Laascanood iyo Garoowe labo wadan kala noqonayn!
Qaranka Somaliland iyo laab la kac, xagee lagu tegin?
Faysal Waraabe iyo Muuse Biixi midna ma aha siyaasi aqli leh.
Qabyaalad muujijeen qayaxan iyo bahdil, anaa awowgood dilay, Faqash waa naqaan sida loo galo.
Afweyne anaga ridnay.. Iyo booto.
Isaaq waa walaalo mijaahidiin ah, Harti ehel isku nahay socon mayso..
Nin walba waa yaqaan baligii geela uga cabi jiray ninka diida in dhulkiisa joogo oo raba in cid kale gurigooda ku jeedal la dhaco, danta ayaa runta barin, taas aniga iga qora.
Rag Cali Injir ku jiro oo dirsan jireen xitaa maanta afkii baa juuqda gabay ma hadli karo waayo tuugo qowlaysato ah dad iibsadey yihiin lagu fahmay. 👊😬
Imisa sano ayaa hadrad iyo been lagu jiri karaa?
SOmalilander oo Darood gumaysta ayaa yaabay.
Walaahi dhiig la iska daadin hadaan aqliga shaqayn, waayo rag la gumeeyo Sool ma degaan.
Ilaa Iyo hada aniga aragtidayda guusha dagaalkan waxaa wata puntland waayo maalinba maalinta kadambaysa waxaala isnacsiinayaa shacabka sool Iyo somaliland
Waxaana xaqiiq ah dhanka dhulbahante ubato ay guushu kudambayn
Dhanka kale hadaanka eegno meeshan khasaaro farabadan oonlamahadindoonin ayaakasoosocda lkn dhamaadka khasaarahaas waa saldhiga wixii aomaliwaynladhihijiray
Aad iyo aad ayay iigumuuqatay inuu muuse biixi yahay ninkii soo afjari lahaa riyadii ay mudada kuriyoonayeen reerwaqooyi ama beesha isaaq ee ahayd kalago a somaliya
Dhanka kale hadaanka eego iyana wuxuusoo afjarayaa muuse riyo beenaadkii xamar iyo hargaysa ee ahayd dalku waa koonfur iyo waqooyi waxaana kaal hogaaminaya labada beelood ewkala ah dhanka xamar iyo hargaysa oo macnuhu ahaa reero tiro ahaana somalida inta badan ah dhul ahaana somalia intabadan ah inla iskuyado inlamaquuniyo oo saamaynta siyaasada somaliya lagasaaro
Kaarar badan oola iskudayayyay mudo waxaasoowada afjaray muuse ninkaysan natiijada bari unuuqanin tamaanta waxba kama garto
Maradaa guntiga sida dhiisha isaga dhig.
Marada guntiga labada low geyso..
Etc. Waa isku mid=wax iska celi, tan dhiisha ka helay, waayo dhiisha Somali xoolo dhaqatada ah, caano ku shubtaan tuulada loo iibgeeyo.
Haddii si fiican xargo loogu adkayn inta ratiga la buubo caanihii daadan.
Markaa shiisha xargaha lagu adkeeyaa, haddii ratiga buubo dhiisha waxba ma daataan xitaa haddii labo beri ka dib ratiga duurka laga soo qabto dhiishii wax kama daadan..
Macawis sida dhiisha guntiga loogu xiray, rag iska galay ka furan mayso, nin maradii ka dhacayday oo qooraha laalaadin inta macawista xiro leeyahay ayaa la dilin.
Macawis furatay rag bay kala adkaysiisaa.
Waa la i gaaday yaan maqlin.
“Marada guntiga sida dhiisha hala isaga dhigo”
I see war is coming.😡
War ninyahow sow adiga Dabshid, Garqaad, Kalahage, etc.. Toosh weyn ku daaray..kkkkkkkk
“Dhanka kale hadaanka eego iyana wuxuusoo afjarayaa muuse riyo beenaadkii xamar iyo hargaysa ee ahayd dalku waa koonfur iyo waqooyi waxaana kala hogaaminaya labada beelood ee kala ah dhanka xamar iyo hargaysa oo macnuhu ahaa reero(Darood) tiro ahaana somalida inta badan ah dhul ahaana somalia intabadan ah inla iskudayo inlamaquuniyo oo saamaynta siyaasada somaliya lagasaaro””
Waa waxa iskugu sheekeyaan, laakiin xagee ka shaqayn. Somaliland waxaan wadan xor ahayn indhahooda ma arkaan. Hawiye asaga isqoraya..kkkkkkkkkkk
Waxaas oo dhan waa fulaynimada Darood laga qabo..
Weli saaxiga lama keenin, inta la leeyahay waan goosanay British Somaliland iyo Aan wax u qaybsano Koofur iyo Waqooyi oo ah Hargeysa iyo Xamar ama Hawiye iyo Isaaq..kkkkk
Federal xaa noogu jura iyo wararka Daroodka,
Aryaa wax noogu qaybiya Koofur iyo Waqooyi, mise Xamar iyo Hargeysa kee dhahnaa??